कवि उपेन्द्र श्रेष्ठको निधन
काठमाडौं, २४ जेठ । नेपाली गद्यकविताका आधुनिक शिल्पी कवि उपेन्द्र श्रेष्ठको ७६ वर्षको उमेरमा सोमबार दिउँसो निधन भएको छ । केही समययता दम र पिसाबको रोगले ग्रस्त श्रेष्ठका निम्तो (२०१७), उपेन्द्र श्रेष्ठका कविता (साझा प्रकाशन, २०३९) र दासले मसँग मुक्ति मागेको (नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, २०६१) लगायत कविताकृति प्रकाशन भएका छन् ।
मकवानपुरको चिसापानीगढीमा जन्मिएका श्रेष्ठ चितवनको नारायणगढ हुँदै पछिल्लो समय काठमाडौँको ताहाचल बस्दैआएका थिए । श्रेष्‍ठका कवितामा मुख्य गरी अस्तित्वको खोजी र देशप्रेमको भावना पाइन्छ ।
Read more about कवि उपेन्द्र श्रेष्ठको निधन
दिनेश गौतमको 'पैसा'
काठमाडौँ, २१ जेठ । युवा गायक दिनेश गौतमको गीति एलबम पैसा बजारमा आएको छ । चार वटा आधुनिक गीत रहेको एलबममा अन्य चार गजल पनि समावेश छन् । एक गीतबाहेक सबै गीत-गजलमा गायक आफैँले सङ्गीत दिएका छन् ।
Read more about दिनेश गौतमको 'पैसा'
युगकवि सिद्धिचरण पुरस्कार डा. तारानाथ शर्मालाई
बैशाख १४ काठमाडौँ -
Read more about युगकवि सिद्धिचरण पुरस्कार डा. तारानाथ शर्मालाई
Read more about सङ्गीत-नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्‍ठानमा अम्बर गुरुङ
वसुन्धराश्री र मानश्री पुरस्कारको घोषणा
काठमाडौँ, ६ बैशाख । वसुन्धरा-मान प्रज्ञा प्रतिष्ठानले २०६७ सालको वसुन्धराश्री पुरस्कार र मानश्री पुरस्कारको घोषणा गरेको छ । वसुन्धरा पुरस्कार वैरागी काइँलालाई दिने निर्णय गरेको छ । नयाँ शैलीशिल्पको कविता सिर्जनाबाट नेपाली साहित्यलाई विशिष्ट स्थानमा पुर् याएबापत काइँलालाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । पुरस्कार राशि ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
Read more about वसुन्धराश्री र मानश्री पुरस्कारको घोषणा
नारायण वाग्लेको 'मयूर टाइम्स' सार्वजनिक
पत्रकार नारायण वाग्लेको दोस्रो उपन्यास मयूर टाइम्स शनिबार सार्वजनिक भएको छ। पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा लेखक वाग्लेले मयूर टाइम्समा समकालीन द्वन्द्वको परिवेश रहेको र मोफसलमा बसेर काम गर्ने पत्रकारको कथा आफ्नो छनोटमा परेको बताए । 'देशको उथलपुथलमय राजनीतिक समयमा काठमाडौंबाहिरबाट संघर्षपूर्ण पत्रकारिता गरिरहेका सहधर्मीहरुको साहस र समर्पणको सम्मान गर्न मैले यही कथा रोजेँ', उपन्यास सार्वजनिक समारोहमा उनले भने । पुस्तकको माग सुरुमै अत्यन्त बढी भइरहेको र अग्रिम बुकिङ भइसकेको अवस्थामा पहिलो संस्करणमै १० हजार प्रति छापेको प्रकाशक संस्था नेपालयले जनाएको छ ।
Read more about नारायण वाग्लेको 'मयूर टाइम्स' सार्वजनिक